एक दर्जनबढी बाटो बाढीले बगाउँदा जोखिम मोलेर यात्रा « dainiki
१४ कार्तिक २०७८, आईतवार १९:४५
१३ कात्तिक, बैतडी । कात्तिकको पहिलो साता भएको अविरल वर्षाले बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा विभिन्न ठाउँका बाटोहरू बगाएपछि स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । अहिले सिगासका मुख्य बाटाहरू थलाकाडादेखि देउरा, बोहरीदेखि लेकम, फाङेपौडदेखि मसानीधार, भौनेली पातलदेखि वडा नम्बर ७ कार्यालय जानेलगायतका मुख्य बाटा र गाउँघरमा ओहोरदोहोर गर्ने अधिकांश बाटा भक्तिएकाछन् ।
दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ बाटो बाढीपहिरोले भत्काएको सिगास-७ लेकमका सुरेन्द्र साउदले बताए । ‘हाम्रो पालिका भित्र १५–२० बाटो बाढीपहिरोले बगाएको छ । गुणस्तरीय बाटो त कतै थिएन । तर, पनि हिँड्न सकिने बाटोहरू थिए । अधिकांश बाटोहरू बगेकाछन् । केही बाटोको त नाम निसान नै मेटिने गरेर भत्किएका छन्,’ उनले भने ।
बाटो भत्किएपछि स्थानीयवासी जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएको उनले बताए । वर्षाले सिगास ६ र ७ बाट बझाङ जिल्लाको देउरा बजार जाने मुख्य बाटो बगाएपछि समस्या भएको सिगास-६ का ईश्वर साउदले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य बजार भनेकै देउरा बजार हो । दैनिक उपभोग्य बस्तु, नुनतेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीलगायत चाहिएका सबै सामान देउराबाटै ल्याउने गरेको थियौं । देउरा जाने बाटो ठाउँ-ठाउँमा भत्किएपछि जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छौं ।’
बाटो भत्किएपछि स्थानीयवासी सेती नदीको माथि पट्टीको भीरबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् । बाटो बिग्रिएसँगै बुढापाका, सुत्केरी महिला र बिरामी मान्छे ओहोरदोहोर गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
ठाउँ-ठाउँका बाटो भत्किएपछि सिगास गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ का गाउँका बासिन्दालाई बजारसम्म पुग्न मुस्किल भएको छ । ढुंगाडमा भने सेती नदीमाथीको पुल नै बाढीले बगाएपछि दैनिक उपभोग्य बस्तु ल्याउनका लागि दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
विगतमा डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका बजारबाट सामान ल्याउने गरेकोमा अहिले डडेलधुराबाट खच्चरमा सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । खच्चरबाट सामान मगाउँदा एक केजीको १० रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको स्थानीय राजेश चन्दले बताए ।
बाटो निर्माणमा कसैको ध्यान नगएको सिगास-७ का भीम बोहराले बताए । उनले भने, ‘बजारसम्म पुग्ने बाटोहरू सबै भत्किएकाले कहाँबाट सामान ल्याउने ? के खाने ? भन्ने चिन्ता बढको छ । जसको घरमा युवाहरू छन् । उनीहरू त जोखिम मोलेर यात्रा गरी सामान ल्याउँछन् । असक्त व्यक्तिलाई निकै समस्या छ ।’ बाटो र पुल भत्किएदेखि समस्यामा परेको उनले बताए ।
सिगासका विभिन्न वडामा वर्षाका कारण पुगेको क्षतिबारे अवलोकन गर्न त्यहाँ पुगेका बैतडीबाट निर्वाचित संघीय सांसद दामोदर भण्डारीले सिगास बासीको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएकाछन् । उनले सिगासमा भएको सबै क्षति अध्ययनपछि संसदमा कुरा उठाउनुका साथै पुनर्निर्माणका लागि सकारका सबै सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने बताए ।
सांसद भण्डारीको टोली एक हप्तादेखि सिगास भ्रमणमा रहेको छ । तीन दिनको वर्षाका कारण सिगासवासीको सात सय रोपनी धान खेत बगरमा परिणत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको तथ्यांक रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०७८, आईतवार १९:४५